သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်နဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ သီချင်းတွေကို ကိုယ်ကျိုးရှာသူတွေအတွက် အသုံးပြုခွင့်မပေးဘူးလို့ ကြေညာလိုက်တဲ့ အဆိုတော် ဆောင်းဦးလှိုင်… – Alanzayar
သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်နဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ သီချင်းတွေကို ကိုယ်ကျိုးရှာသူတွေအတွက် အသုံးပြုခွင့်မပေးဘူးလို့ ကြေညာလိုက်တဲ့ အဆိုတော် ဆောင်းဦးလှိုင်…
ဆောင်းဦးလှိုင် ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဂီတလောကမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် လျှောက်လှမ်းလာခဲ့တဲ့ နာမည်ကျော် Pop အဆိုတော်တစ်‌ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဆောင်းဦးလှိုင်ဟာ လတ်တလောမှာတော့ ပြည်ပမှာ နေထိုင်နေပြီး ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်သီချင်းတွေနဲ့အတူ ဂီတလှုပ်ရှားမှုတွေ ဆက်လက်ပြီးတော့ လုပ်ဆောင်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ ဆေးပညာဘွဲ့ရတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကိုယ်တိုင်ရေးသားပြီး ကိုယ်တိုင်သီဆိုခဲ့တဲ့ တကိုယ်တော်တေး Album ပေါင်း ၁၀ ချပ်ထက်မနည်း ထွက်ရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
သီချင်းတွေကို ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်နဲ့ ကိုယ်ဟန်နဲ့ အသံအေးအေးလေးနဲ့ ပရိသတ် ရင်ထဲရောက်အောင် သီဆိုနိုင်သူ တစ်ယောက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
အခုခေတ်မှာ Cover song သီဆိုတဲ့သူတွေ များပြားလာတာကြောင့် ဆောင်ဦးလှိုင်က သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်နဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ သီချင်းတွေကို ကိုယ်ကျိုးရှာသူတွေအတွက် အသုံးပြုခွင့်မပေးဘူးဆိုပြီး ပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်။
ဆောင်ဦးလှိုင်က “ မျှော်လင့်ချက်တစ်စုံတစ်ရာ “ ဂျပန်အမျိုးသမီး အဆိုတော်ဟာ ရန်ကုန်မှာပွဲလုပ် ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဆီက ခွင့်တောင်းပြီးမှ ဆိုတာပါ။
ဂျပန်လို ဘာသာပြန်ပြီး အနည်းငယ်ဆိုခွင့်ပြုဖို့ပါ ခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ်။ ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ကြွားဝါတာတွေ ဘယ်တော့မှ ရေးတင်လေ့မရှိလို့ လူအများမသိကြပါ။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် Original Songs တွေကို လူအများစုက တန်ဖိုးထားကြပါတယ်။
အလွန်တရာယုတ်ညံ့သူတချို့သာ အပုတ်ချသူချ၊ အသုံးချ ကိုယ်ကျိုးရှာသူရှာ လုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ Google နဲ့ YouTube ဟာ သီချင်းတွေ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်ဟုတ်မဟုတ် နည်းပညာနဲ့စစ်ဆေးပြီး မိနစ်ပိုင်းအတွင်း အဖြေထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ခေတ်ကြီးပါ။
ကျွန်တော့် Own Tune တွေ အဟောင်းရောအသစ်ပါ တစ်ပုဒ်မှ Copyrights နဲ့မငြိပါ။ ဆိုလိုတာက Original songs ( မြန်မာအခေါ် Own Tune ) လို့ သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
မျှော်လင့်ချက်တစ်စုံတစ်ရာကို မြန်မာအဆို မြန်မာစာသားနဲ့မကြားရတာကြာခဲ့ပြီမဟုတ်ပါလား ?? ( အထူးသဖြင့် Live shows & cover songs ) အဖြေကရှင်းပါတယ်။
ကျွန်တော်ခွင့်မပြုတော့လို့ပါ။ အများအကျိုးအတွက် ခွင့်ပြုချက်တောင်းလာတဲ့ အခါမှသာ စဉ်းစားပါမယ်။ ကျွန်တော့်သီချင်းအားလုံးကျွန်တော့်ရင်သွေးများ ဖြစ်ပါကြောင်း။ အလွန်တန်ဖိုးထားပါကြောင်း။ ဆောင်းဦးလှိုင် May 25th 2022” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုခေတ်မှာ Cover song သီဆိုတဲ့သူတွေ များပြားလာတာကြောင့် ဆောင်ဦးလှိုင်က သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်နဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ သီချင်းတွေကို ကိုယ်ကျိုးရှာသူတွေအတွက် အသုံးပြုခွင့်မပေးဘူးဆိုပြီး ပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်။
ဆောင်ဦးလှိုင်က “ မျှော်လင့်ချက်တစ်စုံတစ်ရာ “ ဂျပန်အမျိုးသမီး အဆိုတော်ဟာ ရန်ကုန်မှာပွဲလုပ် ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဆီက ခွင့်တောင်းပြီးမှ ဆိုတာပါ။
ဂျပန်လို ဘာသာပြန်ပြီး အနည်းငယ်ဆိုခွင့်ပြုဖို့ပါ ခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ်။ ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ကြွားဝါတာတွေ ဘယ်တော့မှ ရေးတင်လေ့မရှိလို့ လူအများမသိကြပါ။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် Original Songs တွေကို လူအများစုက တန်ဖိုးထားကြပါတယ်။
မျှော်လင့်ချက်တစ်စုံတစ်ရာကို မြန်မာအဆို မြန်မာစာသားနဲ့မကြားရတာကြာခဲ့ပြီမဟုတ်ပါလား ?? ( အထူးသဖြင့် Live shows & cover songs ) အဖြေကရှင်းပါတယ်။
ကျွန်တော်ခွင့်မပြုတော့လို့ပါ။ အများအကျိုးအတွက် ခွင့်ပြုချက်တောင်းလာတဲ့ အခါမှသာ စဉ်းစားပါမယ်။ ကျွန်တော့်သီချင်းအားလုံးကျွန်တော့်ရင်သွေးများ ဖြစ်ပါကြောင်း။အလွန်တန်ဖိုးထားပါကြောင်း။ ဆောင်းဦးလှိုင် May 25th 2022” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။crd MM Load
Previous Article ယောကျာ်းတွေကမကောင်းဘူးနော်ဆိုပြီး ပရိသတ်တွေကိုသတိပေးလိုက်တဲ့ ယွန်းယွန်း
Next Article နေဒွေး အကုန်ပြောပြီ see more…